Semalt Analytics: Fanavaozana ny Innovation sy Digital amin'ny andro iraisam-pirenena
Ny fanovàna nomerika (antsoina koa hoe fanakorontanana na fanodinana raharaham-barotra) dia manondrony fiovan'ny orinasa sy ny fomba fiasa amin'ny sehatry ny teknolojia ary ny fitantanana nentim-paharazana koa dia niaina fanovana.Ny fanodinana dizitaly dia manan-danja amin'ny karazam-barotra isan-karazany, na raharaham-barotra kely, midina na lehibe. Noho izany, ny fanelingelenana dia metymaso any amin'ny fitsaboana, varotra, rindrambaiko, lojistik na faritra automation. Ny fampiasana ny fanavaozana eo amin'ny raharaham-barotra no fanalahidin'ny fanoloranatraikefa lehibe momba ny raharaham-barotra nomerika ho an'ireo mpiasa sy mpanjifa.
Lisa Mitchell, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia manome fahatakarana ny fomba hanova ny tontolo iainana ankehitriny - develop app.
Ny fomba tsara indrindra hijanonana mialoha amin'ny fifaninanana eo amin'ny tontolon'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia ny mananany fahafahana mampihatra ny fampiharana manokana amin'ny fandraharahana. Ny fototry ny fanovàna nomerika dia mifototra amin'ny fanatsaranany traikefan'ny mpanjifa ary ny fandaniana ny fandaniana amin'ny asa. Na izany aza, ny fifandimbiasana nomerika dia mihoatra noho ny fampivoarana ny teknolojia vaovao. Izany koamomba ny kolontsain'ny fikambanana.
Ny fikambanana dia tokony handinika ny fitakian'ny orinasa goavana, ny fiovan'ny orinasatontolo iainana ary fanavaozana fomba fijery maoderina. Ny IT (Information Technology) ny ekipa sy ny mpitarika ao amin'ny orinasa rehetra dia tokony hiara-miasa amin'ny dianymankany amin'ny fampandrosoana maharitra, mandrisika ny fanavaozana ary manatanteraka ny fepetra takian'ny orinasa. Raha ny marina, izany no mahatonga ny fanovana nomerika-ambanybola, manatsara ny asan'ny orinasa, mitondra fiovana tsara amin'ny modely mahomby, olona sy ny fizotrany ary manatsara ny fotoana fivarotana.
Ny singa manan-danja izay mitarika ny fiovan'ny orinasa dia ahitana ny fangatahana any amin'ny tsena, mpanjifafitondrantena, teknolojia vaovao ary ny tontolo iainana. Ny fanavaozana teknolojika dia mitarika mankany amin'ny fanovana ara-teknolojika.Ny logistics raharaham-barotra dia tokony hampiasa teknolojia vaovao toy ny rahona, RAD, IoT ary ireo angona goavana ary hialana amin'ny rafitra momba ny lova..Ankoatra izany,Ny fanavaozana ara-teknolojia dia ekena amin'ny fikambanana. Mampitombo haingana izy ireo, manome valiny mahomby kokoa, vidiny ambanyary hitondra vokatra eo amin'ny orinasa.
Ny fitondrantenan'ny mpanjifa dia manan-danja iray hafa amin'ny fiovàna nomerika.Inona no andrasan'ny mpanjifa sy ny fangatahan'izy ireo avy amin'ny fikambanana (ary ny teknolojia ilaina amin'ny fangatahana ny fandraharahana ara-barotra)? Mila mpividyManatsara ny fahaiza-manao ara-teknôlôjia mifandraika amin'ny fangatahana hampihena ny fampiasana. Amin'io lafiny io, ny orinasa dia tsy maintsy miatrika ireo tranga ivelanytoy ny fiovan'ny toekarena, ny fepetra takian'ny orinasa, ny fifaninanana eny an-tsena ary ny lalàna mifehy. Ny fangatahan'ny mpanjifa sy ny fahaiza-manaon'ny teknolojiaNy fitakiana ny fangatahana dia manan-danja maro. Ohatra, ny vidiny ambany sy ny fahaiza-manao manatsara dia vokatra roa mazava indrindra.Ankoatra izany, ny Forrester Consulting Research natao avy amin'ny Accenture Interactive, dia nanorina ny fanalahidin'ny fanovana ara-barotratahaka ny fahafaham-po amin'ny mpanjifa, dia nampitombo ny haavon'ny hevitra sy ny tombom-barotra.
Ny fanovana mahomby mahomby dia miankina amin'ny fandaminana maoderinakolontsaina sy matotra dizitaly. Ireo antsipiriany ireo dia asongadina etsy ambany:
Mangataka ny mpanjifa. Ny mpanjifa dia miandrandra fanandramana mahafinaritra amin'ny tsirairayaspect delivery. Noho izany, tandremo ny fandrosoan'ny fikambanananao hahatonga ny mpanjifa tsy hivadika ary ny mpividy dia hiresaka momba ny marika.
Ny fizotry ny asa. Mitombo ny fampidirana mpiasa sy ny fizotry ny famoahana
Fanavaozana ny raharaham-barotra. Famaritana ny modely momba ny fandraharahana na ny digital vaovaoNy vokatra, izay mihoatra noho ny tombontsoa azo avy amin'ny orinasa dia miankina amin'ny fanamafisana ny fitakiana ara-barotra sy ny fampivoarana tolotra vaovao sy vokatra vaovao.
Farany, ny fanovàna nomerika dia fiovana marina izay miteraka oram-baratraao amin'ny tontolon'ny orinasa. Ny fiantraikan'ny fanodinana ny raharaham-barotra dia miharihary fa tsy amin'ny hetsika ihany fa amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny fikambananaary rafitra indostria. Ny CIOs sy ny mpandraharaha ara-barotra dia miezaka mafy mba hahazoana antoka fa ny fanavaozana mifandray amin'ny fanovàna ara-barotra diafiara fitaterana, manome lanja ary mitondra fiovana mahomby.